चीन फ्रोजन लहसुन लौंग निर्माण र कारखाना | Nongchuanggang
कच्चा माल निरीक्षण: कच्चा माल पूर्ण रूपमा आकृति, कुनै सड्न, कुनै क्षतिग्रस्त, कुनै रोग वा कीट कीट, कुनै चिनी लसुनको लौंगहरू र अन्य दोषपूर्ण उत्पादनहरू वा अशुद्धताहरूको साथ आवश्यक हुन्छ।
भिजाउने: सम्पूर्ण लसुन सफा पानीमा लगभग १~ ~ minutes० मिनेट पीलि facil गर्न सजिलोको लागि भिजाउनुहोस्। पिलि:: एक पटक लसुन पिलरले भिजेको लसुन पील गर्नुहोस्। दोस्रो पिलि:: लसुनको लौंगलाई मसिन पिलि processing प्रशोधनबाट खुर्काउनका लागि लसुन छाला सफा छैन कि भनेर पक्का गर्न लौंगहरूलाई म्यानुअल रूपमा पेल गर्नु पर्छ।
ग्रेडिंग: लसुनको लौंग आकारहरू चेक आउट गरियो र ग्राहकको आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण गरियो। निरीक्षण: कार्यशाला स्टाफ निरीक्षण, रोग र कीट नाश, खराब रंग, क्षति, सुख्खा दाग, कपासको दाग, र अन्य दोषपूर्ण उत्पादनहरू र अशुद्धताहरू हटाउनुहोस्।
कीटाणुशोधन: १०० मिलिग्राम / लिटर सोडियम हाइपोक्लोराइट घोलको विसर्जन १ qualified मिनेटमा योग्य लहसुन चामलको स्वीकृति, उद्देश्य मार्न सतह रोगजनक ब्याक्टेरियाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। सफाई: सोडियम हाइपोक्लोराइट अवशेष समाधानहरू हटाउनको लागि पानीको कुल्ला। डिहाईड्रेशन: लसुनको चामलको सतहमा आर्द्रता हावा सुकाउने मेशीनले हटाउनुहोस्।
द्रुत फ्रिजिंग: माथिको श्रृ series्खला पछि शुद्ध लसुन चामललाई नेट बेल्ट प्रकार फ्रिजरमा राख्नुहोस्। उत्पादन समयमा तापक्रम -२25 भन्दा तल छ℃, र उत्पादको केन्द्रमा तापक्रम -१18 भन्दा तल छ℃ द्रुत फ्रिज पछि।
प्याकिंग: प्याकिंग विशेष सफा र सेनेटरी प्याकिंग कोठामा गर्नुपर्दछ, र ठाउँको तापमान ० ~ १० भित्र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।℃.
धातु पत्ता लगाउने: सबै उत्पादनहरू मेटल डिटेक्टर, वर्कशप समर्पित कार्मिकहरू सञ्चालन गर्न, कर्तव्य गुणस्तर नियन्त्रण कर्मीहरूमा हरेक घण्टा संवेदनशीलता परीक्षण गर्न पास गर्नुपर्दछ।
रेफ्रिजरेसन: प्याकेज गरिएको उत्पादनहरू समयमा भण्डारणमा राख्नुपर्दछ। उत्पादनहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, भण्डारण तापमान -२० मा राख्नुपर्दछ±2℃ र १ products भन्दा तल समाप्त गरिएका उत्पादनहरूको केन्द्र तापक्रम℃.
प्रसोधन प्रकार खुली
फ्रिज गर्ने प्रक्रिया IQF
उत्पाद नाम नयाँ मौसम फ्रिज गरिएको लसुनको लौंग
सामग्री १००% ताजा लसुन
स्वाद विशिष्ट स्वाद
आकार १ 150०-२०० / २००-२80० / २0०-8080० पीसी / किलो
आफ्नो जीवन २ Mon महिना अन्तर्गत -१ De डिग्री
प्याकिंग १० किलोग्राम / सीटीएन
MOQ १२ टन्स
मूल्य सर्तहरू एफओबी सीआईएफ सीएफआर
अघिल्लो: ताजा लसुनको लौंग
अर्को: ताजा लसुन